Kala shaki aad u xoogan oo Maanta soo kala dhax galay Ciidamada Dowlada « AYAAMO TV
Kala shaki aad u xoogan oo Maanta soo kala dhax galay Ciidamada Dowlada
940 Views Date February 22nd, 2014 time 1:33 pm
Kala shaki aad u xoogan ayaa maanta soo kala dhax galay raga ku labisan dareeska Ciidanka Dowlada Soomaaliya ee kusugan Magaalada Muqdsho, kadib Weerarkii maalintii shalay lagu qaaday Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya.
Ciidamada Dowlada ayaa maanta xiray Wadooyin badan oo kuyaala Magaalada Muaqdisho kuwaa oo u diidayay isticmaalkooda gaadiidka , waxaana wadooyinka xiran maanta xitaa loo diidayay gaadiidka gaarka ah ay wataan askarta katirsan Ciidanka Dowlada.
Wadooyinka xiran qaarkood ayaa laga dareemayay kala shaki aad u xoogan oo soo kala dhax galay Ciidanka Dowlada Soomaaliya , kuwaa oo mararka qaarkood la arkayay iyaga oo quryaha isku qabanaya.
Ciidamo katirsan Dowlada oo gawaari gaar ah watay ayaa kabiyo diidayay amarada kasoo baxaya Ciidanka xiray Wadooyinka Muqdisho qaarkood taa oo keenaysay in ay kala shakiyaan Ciidamada kuwada labisan dareeska Ciidanka Dowlada Soomaaliya.
Kala shakiga Ciidamada kawada tirsan Dowlada ayaa yimid kadib weerar maalintii shalay rag hubeesan oo katirsan Al-Shabaab kuna labisnaa dareeska Ciidanka Dowlada Soomaaliya weerar qasaaro badan dhaliyay ku qaadeen Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya .